Amathuba Okude Emsakazweni Wokuthunyelwa Kwezokukhangisa - I-NAB Bonisa Izindaba Ze-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Ukuphathwa kokuqukethwe » Amathuba okude ekuthumeni kokuthunyelwa kwezokuthunyelwa
I-OpenDrives Yenza i-Workflows ye-Workflows ye-Efficiency Increased
Inzuzo engaphenduliwe yokusakazwa bukhoma ikhona ngokushesha kwayo. Inkinga kuphela ukuthi ama-workflows yendabuko emva kokukhiqiza okufanelekile okukhiqizwa kwezakhiwo akuyona indlela ephumelelayo kakhulu yokwenza lokhu kwenzeke ngemicimbi ebukhoma emikhulu. Kusukela kumbono wokusebenza komsebenzi wezobuchwepheshe, ukusakazwa bukhoma kuthatha izithombe njengoba kwenzeka ngokusebenzisa imishini engasetshenzisiwe bese uhlinzeka lokho okuqukethwe izethameli ngokuncane noma akukho okungeziwe okungeziwe kwemisebenzi yokuthunyelwa ngemuva kokukhiqiza (njengokuhlela noma ukulungiswa kombala). Nge-post-production ifika isikhathi esiphezulu sesikhathi sokudalwa kwabadlali ukuze bafinyelele okuqukethwe, benze umsebenzi odingekayo noma oyifunayo wokuthunyelwa komsebenzi, futhi ukubeka kabusha okuqukethwe okuqukethwe ngokukhethekile ukusabalalisa phansi. Ngomsebenzi omuhle wokusebenza kanye nengqalasizinda eyisekelayo, noma kunjalo, singanciphisa kakhulu ukuthi isikhathi sokuthunyelwa kwesikhathi.
I-OpenDrives ibambe iqhaza kwimicimbi yamanje yamuva eyasinselela ukusiza amanye ama-post-production workflows yemicimbi ebukhoma. Ku-BlizzCon ngasekupheleni kwe-2018, sisize ukuhambisa enye yezengezo ezithandekayo kakhulu kumcimbi owasiza ekunciphiseni ukungaphumeleli kokungena kwempahla, okwakuyi-Post Hub eyasiza ukuhamba komsebenzi wokuthumela ngemuva kokukhiqiza. Esikhundleni sezo zonke izigaba ezenza umsebenzi wazo ohlukile ngemva kokukhiqizwa emaphethelweni, zonke izigaba zondla okuqukethwe-njengezikhulumi zamasondo-zingene eHhovisi eliphakathi elisekelwa yi-OpenDrives isisombululo sokugcina esisezingeni eliphezulu se-NAS kufaka phakathi i-OpenDrives yonke Uhlelo lwe-Apex neSivumelwano se-OpenDrives Summit hybrid. Abahleli be-Posts ku-Post Hub basebenze kusuka echibini elikhulu eliphakathi kwezinto ezitholakala kwi-OpenDrives isitoreji, okwenza ngokushesha ukukhiqizwa okuvela ngaphakathi komcimbi ngokwawo ngaphambi kokusabalalisa kokugcina ezindaweni eziningi ezahlukene.
Nge-Grammys yonyaka, sathumele amathuluzi okuzenzekelayo endaweni futhi sathumela konke emuva esikhungweni esinezigodlo ezine lapho yonke imishini ikhona. Ngale ndlela, ukukhiqizwa kweselula kungahambahamba, ngenkathi ukubeka phambili ukusebenza kwenziwa emuva kulesi sikhungo. Lokhu kuhamba komsebenzi kwakunezindleko ezithe xaxa ngenkathi futhi kuqinisekisa ukusebenza okuphakeme, ukudlulisa, nokuthembeka kwedatha. Konke ukuqoshwa kanye nama-VOD agcinwe ohlelweni oluvulekile lwe-OpenDrives Apex, okuyinto yesisombululo sethu sonke esiphezulu se-ultra high-performance. Ukusethwa kwefolda okuzenzakalelayo yokubuka kuthatha lawo mafayili futhi ihlanganisiwe ihluzo nama-"amakhanda nemisindo" yomsindo kubo. Uma sekuhlangene, ukuhanjiswa komsebenzi kugcizelele lawa mafayili kwifomethi yefayela ekhokhwayo futhi wabathumela kusuka endaweni eSitatimendeni Sezinyathelo phezu komzila wedatha ozinikezele endaweni e-Marina del Rey. Kuleli qophelo, abahleli bahlanganyele, benze i-QC nokuhlelwa kokudlula kokugcina, benza noma yiziphi izixazululo, bese behambisa okuqukethwe ngokusebenzisa iziteshi ezihlukahlukene nezokuphela, njenge-Grammys website. Kwakungumxube ophelele wezobuchwepheshe, ukuzenzekelayo, nokuhlelwa kwabantu kokudala.
Ukuze izenzakalo zamanje ezifana nezokugcina ze-NBA, I-US Open (i-Fox Sports), sidale ukusebenza okuqhubekayo ngenxa yesikhathi sokunciphisa esinciphile. I-US Open okwamanje ithumele i-OpenDrives ukuthola imifudlana ye-10 yamarekhodi wekhamera ye-720P DNX100 (equkethe i-Venice, i-RED, ne-F55) eya kubahleli be-5 nabaphathi bezindaba ze-2. Inkambu ye-4x10Gbps iyayishaya ihlasela i-OpenDrives ku-400MB / s kwisitoreji. Sithumele izixazululo zethu zokugcina esimweni samahora, hhayi izinsuku. Naphezu kwalolu lula lokusetha, izixazululo zethu zokugcina ziqinisekisa izinga eliphezulu lokusebenza nokuphuma ukuze kusekele izidingo zalezi zenzakalo ezibukhoma ngenkathi kuvumela ukusebenza okusebenzayo kokuthunyelwa ngemuva kokukhiqiza ukuze kwenziwe imali yokwenza okuqukethwe okuvela kubo.
I-OpenDrives I-Evangelist yomkhiqizo
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Ukusakaza-SocialMeida I-Cobalt Encoder Ukuhlela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor SJGolden - Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago I-TVU Izinethiwekhi Umlingisi wevidiyo	2019-06-14
Ngaphambilini: Ama-Areia Creations akhiqiza amavidiyo we-KPOP Music with Blackmagic Design amakhamera, i-Blackmagic RAW ne-DaVinci Resolve
Olandelayo: Ukunika amandla iWebroadcarding Webcasting Workflows nge-Matrox® Monarch EDGE